उम्मेद्वार - प्रकाश मान सिंह
प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ १
२०४६ सालको जनआन्दोलका कमाण्डर गणेशमान सिंह र आमा मंगलादेवीको छोरा प्रकाशमानको जन्म बि.सं. २०१२ साल चैत्र २१ गते काठमाडौं १६, क्षेत्रपाटीमा भएको हो । उहाँले विद्यार्थी अवस्थामै राजनैतिक यात्रा शुरु गर्नुभयो ।
विभिन्न समयमा पक्राउ परेका सिंहले करिब २ वर्ष बन्दी जीवन बिताउनु भएको थियो । प्रकाशमान सिंहका दुई छोरा छन् । उहाँले तथ्याङ्क शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । उहाँ काठमाडौं जिल्ला नेपाली कांग्रेसको सभापति र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को उपसभापति भएर काम गरिसक्नुभएको छ ।
सिंहले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री, आपूर्ति मन्त्री र भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ । पार्टी संगठनमा कुशल मानिनु हुने सिंहको रुची समाजसेवामा पनि छ । उहाँले २०४८ र २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनुभएको थियो ।
सिंह व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि भैसक्नुभएको छ । २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सिंहले सक्रिय भूमिका निभाउनु भएको थियो । २०३४ सालदेखि राजनीतिक यात्राको शुरुवात गरेका सिंह २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा एमालेका प्रदिप नेपाललाई पराजित गर्दै विजयी बन्नु भएको थियो ।
सिंहले १४ हजार ३ सय १८ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो भने नेकपा एमालेका नेपालले ६ हजार ७ सय ८९ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका डा. राममान श्रेष्ठले ४ हजार ८ सय ३६ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । उहाँ दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नै विजयी हुनुभएको थियो ।